Izindaba - Yini Ezuzisa I-Carver Bimini Top Letha?
Ukuvikelwa Kwelanga Okubalulekile Emanzini
Futhiukuchayeka kakhulu elangeni wisikhukhukazi ungaphandle ngesikebhe esivulekile kungaholela ekushiseni okubi.Ngenxa yendlela amanzi aveza ngayo ukukhanya kwelanga emzimbeni wakho, ilanga oligibela esikebheni libi kakhulu kunelanga olithola lapho usemhlabeni.
Nakuba ukumboza isigqoko, izingubo ezifanele, nokusebenzisa i-sunscreen kuzosiza ekuvikeleni elangeni, ngeke kukunikeze umthunzi ozonikezwa yi-Bimini Top.
Iyini i-Bimini Top?
I-Carver Bimini Tops izokunikeza ukumbozwa okuhle kakhulu ngenkathi uhamba ngesikebhe.
Ikhava ephezulu ye-XGEAR Bimini iqukethe uhlaka lwensimbi olusekela iseyili evulekile emaceleni,kusetshenziswa indwangu edayiwe yesixazululo esingu-600D enokuthunga okuphindwe kabili okugqagqene okuhle ukuthi kungangeni manzi.Isembozo sesikebhe se-Bimini Top esinohlaka lwe-aluminium eyintshi engu-1 enamamodeli angu-2: imodeli#1 enezintambo ezi-4 ezilungisekayo, imodeli#2 enamabhande amabili alungisekayo ngaphambili nezigxobo ezisekelayo ezingu-2 zangemuva.Kufana nesambulela esinemilenze emi-4 evala ingxenye yesikebhe sakho.
I-Bimini Tops yenza ukuphumula emanzini kube lula, ngakho-ke ungayeka ukukhathazeka ngokulimaza isikhumba sakho.Sinikeza phezulu-of-the-line phezulu Bimini ngezinto ezihamba phambili embonini.Kukhona imibala eyi-10 ephelele nosayizi ohlukile ongu-7 ongakhetha kuwo.
Zenziwa Kanjani Iziqongo Ze-Bimini?
Ikhava ephezulu ye-XGEAR Biminis woza ngobude ukusuka6'kube8' zinde futhi zizogibela ezikebheni kusuka kuma-inflatable amancane kuya kuma-cabin cruisers amakhulu.I-Carver Bimini Tops ifika ejwayelekile neshubhu le-aluminium kanye nokufakwa kwenayiloni.Umnsalo oyinhloko we-Bimini yethu ephezulu inezindonga ezimbili, ukuze unikeze ukuzinza okwengeziwe.Ukufakwa kwethu kusezingeni eliphezulu embonini ye-Bimini.Ungakhetha usayizi wakho we-Bimini Top, noma ungahamba nesinye sezincomo zomkhiqizi wethu.Ukuze ukhethe usayizi wakho, sidinga nje ukwazi ububanzi phakathi kwamaphoyinti akho akhwezayo, ubude ukusuka endaweni okhwele kuyo phezulu, nobude bekhanvasi ongabukhetha.
Senza zonke izembozo zesikebhe sethu, iziqongo ze-bimini zezikebhe, futhi siyakwazi ukuqinisekisa kangcono ikhwalithi nokushesha kwawo wonke amakhava ethu e-Carver.
Isikhathi sokuthumela: Mar-11-2022